လကျဖဝါး မှာ ‘M’ အက်ခရာရှိသူတှေ ဟာ တမူထူးခွားနသေူတှဖွေဈ… – ခြာတိတျမလေး
လကျဖဝါး မှာ ‘M’ အက်ခရာရှိသူတှေ ဟာ တမူထူးခွားနသေူတှဖွေဈ…
admin | February 24, 2020 | Astrology | No Comments
သင့်လက်ဖဝါးပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ “M” သင်္ကေတပါရှိလား?လက်ဖဝါး မှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေ ဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ်။
လက္ခဏာကြည့်တယ်ဆိုတာ လက်ဖဝါးကိုမြေပုံတစ်ခုလိုသဘောထားပြီး ဘဝအကြောင်းအစုံစုံကိုဖတ်ကြားရတဲ့ အတတ်ပညာမျိုးဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ချင် (Ching)ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ ပထမဆုံးတွေ့မြင်သိကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး အရစ်စ်တိုတယ် (Aristotle) ဟာဆိုရင် လက္ခဏာဖတ်ရှု့ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်က အတတ်ပညာတွေကို အင်မတန်စိတ်ပါဝင်စားခဲ့ပီး လက်ဖဝါးပေါ်ကအရာတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပြနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကိုမယုံသူတွေရှိပေမယ့်ကမ္ဘာအနှံ့မှာ သက်ဝင်ယုံကြည်သူတွေကလည်းအများအပြားရှိနေဆဲပါပဲ။ ဒီလိုပဲ လက္ခဏာဖတ်ခြင်းအတတ်မှာလည်း ညဏ်ပညာ၊အတွေ့အကြုံနဲ့ပြည့်စုံပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာသမားတွေရှိသလို စာအုပ်ဖတ်ပြီးအိယောင်ဝါးလုပ်ချတဲ့တတ်ယောင်ကားတွေကလည်းရှိပါလေရဲ့…
ခုပြောပြမှာကတော့ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ “M” ပါရှိသူတွေအကြောင်းတစေ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာပညာကိုလုံးဝမသိသူတွေအတွက် ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အခြေခံသဘောတရားအရ လက်ဖဝါးပြင်မှာ ထင်ရှားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးလေးခုရှိပြီး…
အဲဒါတွေကတော့ .. အသက်လမ်းကြောင်း၊နှလုံးလမ်းကြောင်း၊ ဥာဏ်လမ်းကြောင်းနဲ့ ကံလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီိလမ်းကြောင်းလေးခုထဲက ကံလမ်းကြောင်းကိုိဖယ်ပြီး ကျန်တဲ့လမ်းကြောင်းသုံးခုကစပ်ဆက်သွားတဲ့အခါ လက်ဖဝါးပြင်ပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ “M” ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လာပါတယ်။
အဲဒီိပုံသဏ္ဍာန်ကလူတိုင်းမှာမရှိသလို ရှိတဲ့လူတွေဟာလည်း သာမန်လူတွေမဟုတ်ပဲ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ထူးခြားသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ လက္ခဏာကျမ်းအစောင်စောင်ကဆိုပါတယ်။ ဗေဒင်လက္ခဏ လေ့လာလိုက်စားသူများနှင့် စာဖက်ပရိတ်သတ်များ ဗဟုသုတတိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြပေးလိုက် ရပါတယ်
လက်ဝါးပြင်မှာ “M” ပုံသဏ္ဍာန်ပါဝင်သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် ထူးခြားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မသိစိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးမားပြီး သာမန်မဟုတ်ပဲ တစ်စုံတစ်ရာအတွက်မွေးဖွားလာသူတွေလို့အဆိုရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးရှိကြပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကိုိကြောက်ရွံ့လေ့မရှိပါဘူး။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘုရားပေးတဲ့ ထူးချွန်မှုမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့နယ်ပယ်ကိုရှာဖွေရာမှာတော်တဲ့သူတွေဖြစ်သလို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဆိုရင်လည်း အဲဒီ့နယ်ပယ်မှာသေချာပေါက်အောင်မြင်မယ့်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
ကိုယ်ကလည်း ကြိုးစားပေါ့နော်၊ငယ်ငယ်ကဆရာတွေပြောသလို လက်သည်ကိုချည်းအားမကိုးနဲ့ပေါ့ ၊ သူတို့ဟာ အပြင်မှာဘယ်လိုပဲ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့နေတတ်သူတွေဖြစ်ပါစေ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပက်သက်လာရင်တော့ တစ်ဆံခြည်မရွေ့အောင်စည်းကမ်းလိုက်နာသူတွေ…
စည်းကမ်းတင်းကြပ်သူတွေဖြစ်ကြပြီိးအများက ချီးကျူးအားပေးရလောက်အောင် ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိသူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးပြင်မှာ M ပါရှိသူတွေက ဘယ်တော့မှ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အကျိုးမပေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက သစ္စာတရားကြီးမားပြီး အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေဖြစ်လို့ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ လက်ဖဝါးပြင်မှာ M ပါသူတွေဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကလိမ်လည်နေပြီဆိုရင် အလိုလိုသိတတ်ကြပါတယ်။ လိမ်တာကိုအလွန်မုန်းတီးတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ပါ။ သေးသေးမွှားမွှားလေးအလိမ်ခံရရင်တောင် သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရသလိုခံစားမိတတ်ကြတာကြောင့် သူတို့နဲ့ပက်သက်မိရင်တော့ မလိမ်မိဖို့ကြိုးစားပါ။
နောက်ပြီးသူတို့ကအကြောက်အလန့်မရှိဘူးဆိုပေမယ့် ကမူးရှုးထိုးလုပ်မယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ အချစ်ရေးမှာဆိုရင် သူတို့ဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို တွယ်ငြိပြီဆိုရင်လည်းတအားတွယ်ငြိပြီး မတွယ်ငြိဖို့ကြိုးစားစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီိဆိုရင်လည်း လုံးလုံးအေးစက်ငြိမ်သက်သွားပြီး အဲဒီိလူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရရင်လည်း ဂရုမစိုက်တော့မယ့်လူမျိုးပါ။
ဒါပေမယ့် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နေရာအသစ်တွေမှာ လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။စိတ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်နေနေ အပြင်မှာတော့ လူတွေနဲ့လိုက်လိုက်လျောလျောနေတတ်ကြပြီး….
အဲဒီလိုနေတာကလည်း သူတုိ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုအနည်းနဲ့အများထိခိုက်စေတာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သွားမှ ဆတိုးပြီးဝမ်းနည်းအထီးကျန်တတ်သူတွေဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ M အက္ခရာပါတာက အကောင်းချည်းပဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ရဲ့နဂိုဗီဇနဲ့ကံကြမ္မာက သူတို့အနားကို အခွင့်အရေးသမားတွေ၊လိမ်ညာလှည့်ဖျားတတ်သူတွေနဲ့ကြုံဆုံရအောင် ဖန်တီးပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဘယ်သူကတော့ လိမ်ညာသူ၊ဘယ်သူကတော့လူကောင်းဆိုတာ များသောအားဖြင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခွဲခြားနိုင်ကြပါတယ်။
လက်ဖဝါး ရှိ လက္ခဏာကောက်ကြောင်းလေးတွေက မိမိဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖော်ညွန်းနေတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် အက္ခရာစလုံးရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားသူလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထူးထူးခြားခြား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ်းတွင်း အသိရှိသူ၊ နောက်ပြီး ထူးကဲတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။မိမိချစ်ရသူတစ်ယောက်က လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာ ရှိပါက အချက်တစ်ချက်ကို သိထားရပါမယ်။
နောက်ပြောင်ခြင်း၊ လိမ်ညာမုသားပြောဆိုခြင်းနဲ့ ကလိမ်ကျခြင်းတွေ လုံးဝ မလုပ်မိဖို့ပါပဲ။လုပ်မိသွားရင်တော့ သင့်ကို လိမ်ညာပြောတတ်သူလို့ သူ အမြဲသတ်မှတ်နေပါလိမ့်မယ်။လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာစလုံးရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားများထက် ဝမ်းတွင်းအသိ ပိုပြင်းထန်ကြပါတယ်။
လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမှာရှိပါက အမျိုးသမီးမှာ ပိုမိုအားကောင်းနေပါသေးတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘဝမှာ သူတို့လုပ်လိုတဲ့ အပြောင်းအလဲများ ဆောင်ရွက်ဖို့ အစွမ်းအစကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ဘဝမှာ အခွင့်အလမ်းကို လက်မလွှတ်တမ်း အသုံးချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ရှေးရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ပရောဖက်အားလုံး လက်ဖဝါးမှာ ဒီလက္ခဏာ ရှိကြပြီးသင်က လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါက သင်ဟာ တမူထူးခြားသော လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိမှတ်ရပါမယ်။
သငျ့လကျဖဝါးပျေါမှာ အင်ျဂလိပျအက်ခရာ “M” သင်ျကတေပါရှိလား?လကျဖဝါး မှာ ‘M’ အက်ခရာရှိသူတှေ ဟာ တမူထူးခွားနသေူတှဖွေဈတယျ။
လက်ခဏာကွညျ့တယျဆိုတာ လကျဖဝါးကိုမွပေုံတဈခုလိုသဘောထားပွီး ဘဝအကွောငျးအစုံစုံကိုဖတျကွားရတဲ့ အတတျပညာမြိုးဖွဈပွီး တရုတျနိုငျငံရဲ့အမှအေနှဈတဈခုဖွဈတဲ့ ခငျြ (Ching)ဆိုတဲ့စာအုပျထဲမှာ ပထမဆုံးတှမွေ့ငျသိကွားခဲ့ရတယျလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။
အတှေးအချေါပညာရှငျကွီး အရဈဈတိုတယျ (Aristotle) ဟာဆိုရငျ လက်ခဏာဖတျရှု့ခွငျးရဲ့နောကျကှယျက အတတျပညာတှကေို အငျမတနျစိတျပါဝငျစားခဲ့ပီး လကျဖဝါးပျေါကအရာတှကေ လူတဈယောကျရဲ့အနာဂတျကိုပွောပွနိုငျကွောငျးယုံကွညျခဲ့သူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒါကိုမယုံသူတှရှေိပမေယျ့ကမ်ဘာအနှံ့မှာ သကျဝငျယုံကွညျသူတှကေလညျးအမြားအပွားရှိနဆေဲပါပဲ။ ဒီလိုပဲ လက်ခဏာဖတျခွငျးအတတျမှာလညျး ညဏျပညာ၊အတှအေ့ကွုံနဲ့ပွညျ့စုံပွီး ကြှမျးကငျြတဲ့ဆရာသမားတှရှေိသလို စာအုပျဖတျပွီးအိယောငျဝါးလုပျခတြဲ့တတျယောငျကားတှကေလညျးရှိပါလရေဲ့
ခုပွောပွမှာကတော့ လကျဖဝါးပျေါမှာ အင်ျဂလိပျအက်ခရာ “M” ပါရှိသူတှအေကွောငျးတစတေ့စောငျးပဲဖွဈပါတယျ။လက်ခဏာပညာကိုလုံးဝမသိသူတှအေတှကျ ပွောရမယျဆိုရငျဖွငျ့ အခွခေံသဘောတရားအရ လကျဖဝါးပွငျမှာ ထငျရှားတဲ့လမျးကွောငျးကွီးလေးခုရှိပွီး…
အဲဒါတှကေတော့ .. အသကျလမျးကွောငျး၊နှလုံးလမျးကွောငျး၊ ဉာဏျလမျးကွောငျးနဲ့ ကံလမျးကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလမျးကွောငျးလေးခုထဲက ကံလမျးကွောငျးကိုဖယျပွီး ကနျြတဲ့လမျးကွောငျးသုံးခုကစပျဆကျသှားတဲ့အခါ လကျဖဝါးပွငျပျေါမှာအင်ျဂလိပျအက်ခရာ “M” ပုံသဏ်ဍာနျပျေါလာပါတယျ။
အဲဒီပုံသဏ်ဍာနျကလူတိုငျးမှာမရှိသလို ရှိတဲ့လူတှဟောလညျး သာမနျလူတှမေဟုတျပဲ သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ထူးခွားသူတှဖွေဈကွတယျလို့ လက်ခဏာကမျြးအစောငျစောငျကဆိုပါတယျ။ ဗဒေငျလက်ခဏ လလေ့ာလိုကျစားသူမြားနှငျ့ စာဖကျပရိတျသတျမြား ဗဟုသုတတိုးပှားစရေနျ ရညျရှယျ၍ ဖျောပွပေးလိုကျ ရပါတယျ
လကျဝါးပွငျမှာ “M” ပုံသဏ်ဍာနျပါဝငျသူတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ ထူးခွားတဲ့လူတှဖွေဈကွပါတယျ။ မသိစိတျရဲ့လှမျးမိုးမှုကွီးမားပွီး သာမနျမဟုတျပဲ တဈစုံတဈရာအတှကျမှေးဖှားလာသူတှလေို့အဆိုရှိပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကောငျးမှနျတဲ့လူမှုဆကျဆံရေးရှိကွပွီး စိနျချေါမှုတှကေိုကွောကျရှံ့လမေ့ရှိပါဘူး။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတှနေဲ့ပကျသကျပွီး ဘုရားပေးတဲ့ ထူးခြှနျမှုမြိုးရှိတတျကွပါတယျ။ ကိုယျ့အတှကျမှနျကနျတဲ့နယျပယျကိုရှာဖှရောမှာတျောတဲ့သူတှဖွေဈသလို ရှာဖှတှေရှေိ့ပွီဆိုရငျလညျး အဲဒီ့နယျပယျမှာသခြောပေါကျအောငျမွငျမယျ့သူတှဖွေဈကွပါတယျ။
ကိုယျကလညျး ကွိုးစားပေါ့နျော၊ငယျငယျကဆရာတှပွေောသလို လကျသညျကိုခညျြးအားမကိုးနဲ့ပေါ့ ၊ သူတို့ဟာ အပွငျမှာဘယျလိုပဲ စညျးမဲ့ကမျးမဲ့နတေတျသူတှဖွေဈပါစေ လုပျငနျးခှငျနဲ့ပကျသကျလာရငျတော့ တဈဆံခွညျမရှအေ့ောငျစညျးကမျးလိုကျနာသူတှေ…
စညျးကမျးတငျးကွပျသူတှဖွေဈကွပွီးအမြားက ခြီးကြူးအားပေးရလောကျအောငျ ကွိုးစားခငျြစိတျရှိသူတှလေညျးဖွဈကွပါတယျတဲ့။ ဒါပမေယျ့ လကျဖဝါးပွငျမှာ M ပါရှိသူတှကေ ဘယျတော့မှ မကောငျးတဲ့အလုပျတှနေဲ့အကြိုးမပေးဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ သူတို့ကိုယျတိုငျကိုက သစ်စာတရားကွီးမားပွီး အမှနျတရားကိုခဈြမွတျနိုးသူတှဖွေဈလို့ပါ။
နောကျတဈခုကတော့ လကျဖဝါးပွငျမှာ M ပါသူတှဟော တဈစုံတဈယောကျကလိမျလညျနပွေီဆိုရငျ အလိုလိုသိတတျကွပါတယျ။ လိမျတာကိုအလှနျမုနျးတီးတဲ့သူတှဖွေဈလို့ပါ။ သေးသေးမှားမှားလေးအလိမျခံရရငျတောငျ သစ်စာဖောကျခံလိုကျရသလိုခံစားမိတတျကွတာကွောငျ့ သူတို့နဲ့ပကျသကျမိရငျတော့ မလိမျမိဖို့ကွိုးစားပါ။
နောကျပွီးသူတို့ကအကွောကျအလနျ့မရှိဘူးဆိုပမေယျ့ ကမူးရှုးထိုးလုပျမယျလို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ အခဈြရေးမှာဆိုရငျ သူတို့ဟာ လူတဈဦးတဈယောကျကို တှယျငွိပွီဆိုရငျလညျးတအားတှယျငွိပွီး မတှယျငွိဖို့ကွိုးစားစိတျပိုငျးဖွတျလိုကျပွီဆိုရငျလညျး လုံးလုံးအေးစကျငွိမျသကျသှားပွီး အဲဒီလူကိုဆုံးရှုံးလိုကျရရငျလညျး ဂရုမစိုကျတော့မယျ့လူမြိုးပါ။
ဒါပမေယျ့ အံ့သွစရာကောငျးလောကျအောငျနရောအသဈတှမှော လိုကျလြောညီထှနေထေိုငျနိုငျစှမျးရှိကွပါတယျ။စိတျထဲမှာဘာပဲဖွဈနနေေ အပွငျမှာတော့ လူတှနေဲ့လိုကျလိုကျလြောလြောနတေတျကွပွီး….
အဲဒီလိုနတောကလညျး သူတုိ့ရဲ့အတှငျးစိတျကိုအနညျးနဲ့အမြားထိခိုကျစတောဖွဈလို့ တဈယောကျတညျးဖွဈသှားမှ ဆတိုးပွီးဝမျးနညျးအထီးကနျြတတျသူတှဆေိုရငျလညျးမမှားပါဘူး။ လကျဖဝါးပျေါမှာ M အက်ခရာပါတာက အကောငျးခညျြးပဲတော့မဟုတျပါဘူး။
သူတို့ရဲ့နဂိုဗီဇနဲ့ကံကွမ်မာက သူတို့အနားကို အခှငျ့အရေးသမားတှေ၊လိမျညာလှညျ့ဖြားတတျသူတှနေဲ့ကွုံဆုံရအောငျ ဖနျတီးပေးတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က ဘယျသူကတော့ လိမျညာသူ၊ဘယျသူကတော့လူကောငျးဆိုတာ မြားသောအားဖွငျ့မွနျမွနျဆနျဆနျခှဲခွားနိုငျကွပါတယျ။
လကျဖဝါး ရှိ လက်ခဏာကောကျကွောငျးလေးတှကေ မိမိဝိသသေလက်ခဏာနဲ့ ကံကွမ်မာကို ဖျောညှနျးနတောလို့ ဆိုကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့ လကျဖဝါးမှာ M ပုံသဏ်ဍာနျ အက်ခရာစလုံးရှိသူတှဟော တမူထူးခွားသူလို့ ဆိုပါတယျ။
အဲဒီပုဂ်ဂိုလျတှဟော ထူးထူးခွားခွား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမျးတှငျး အသိရှိသူ၊ နောကျပွီး ထူးကဲတဲ့ စီးပှားရေး လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ လို့လညျး ဆိုကွပါတယျ။မိမိခဈြရသူတဈယောကျက လကျဖဝါးမှာ M အက်ခရာ ရှိပါက အခကျြတဈခကျြကို သိထားရပါမယျ။
နောကျပွောငျခွငျး၊ လိမျညာမုသားပွောဆိုခွငျးနဲ့ ကလိမျကခြွငျးတှေ လုံးဝ မလုပျမိဖို့ပါပဲ။လုပျမိသှားရငျတော့ သငျ့ကို လိမျညာပွောတတျသူလို့ သူ အမွဲသတျမှတျနပေါလိမျ့မယျ။လကျဖဝါးမှာ M အက်ခရာစလုံးရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော အမြိုးသားမြားထကျ ဝမျးတှငျးအသိ ပိုပွငျးထနျကွပါတယျ။
လငျမယားနှဈယောကျလုံးမှာရှိပါက အမြိုးသမီးမှာ ပိုမိုအားကောငျးနပေါသေးတယျ။ဒီပုဂ်ဂိုလျတှဟော ဘဝမှာ သူတို့လုပျလိုတဲ့ အပွောငျးအလဲမြား ဆောငျရှကျဖို့ အစှမျးအစကို ပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ ဘဝမှာ အခှငျ့အလမျးကို လကျမလှတျတမျး အသုံးခဖြို့ လိုအပျပါတယျ။
ရှေးရိုးရာ ဓလထေုံ့းတမျးစဉျလာအရ ပရောဖကျအားလုံး လကျဖဝါးမှာ ဒီလက်ခဏာ ရှိကွပွီးသငျက လကျဖဝါးမှာ M ပုံသဏ်ဍာနျပိုငျဆိုငျထားသူ ပုဂ်ဂိုလျတှထေဲက တဈဦးဖွဈပါက သငျဟာ တမူထူးခွားသော လူပုဂ်ဂိုလျ တဈဦးဖွဈကွောငျး သိမှတျရပါမယျ။